Afhayeenka barlamaanka Tansaaniya oo ku baaqday dhowrsanaan iyo xisaab-celin ka hirgasha waaxda dawladda - Sabahionline.com
Afhayeenka barlamaanka Tansaaniya oo ku baaqday dhowrsanaan iyo xisaab-celin ka hirgasha waaxda dawladda
Afhayeenka barlamaaka Tansaaniya ayaa Isniintii (28-ka May) furtay shir saddex maalmood socon doona, kaas oo ku saabsan xisaabinta iyo xisaab-celinta, iyada oo ugu baaqday xubnaha barlamaanka in ay u hoggaansamaan akhlaaqiyaadka shaqada iyo dhowrsanaanta.
6 sharci-dajiye Tansaaniyaan ah oo la eryay kadib u dhaqmid si aan munaasib ahayn
Af-hayeenka Barlamaanka Tansaaniya oo musuqmaasuq dartii u kala diray guddigii Tamarta
Tirakoobkii Tansaaniya oo biloowday, dhibaatooyin laga soo sheegaya la'aanta dharka u gaarka ah howl-wadeennada
Sababta asalka ah ee saboolnimada ka jirta inta badan dalalka Afrika ka dambaysa waxa ay ka timaaddaa dhowrsanaan la’aanta iyo maqnaanta xisaab-celinta xafiisyada dawladda ayay tiri Afhayeenad Anne Makinda, sida lagu qoray wargayska Daily News ee kasoo baxa Tansaaniya.
“Xildhibaannada la doorto waa in ay noqdaan tusaale lagu daydo, si markaa kuwa doortay ay kalsooni ugu qabaan. Xildhibaannadu waa in ayan niyad-jabin dadka u soo doortay xafiisyada ay hayaan,” ayay tiri Makinda.
Sidoo kale Isniintii, afhayeenka ayaa ugu yeertay saraakisha gobollada in ay isticmaalaan jaan-gooyooyin hal-abuur ku dheehan yahay si ay uga shaqeeyaan shacabka, isla markaana wax uga qabtaan dhibaatooyinka hor taagan dadka, dadaalka ay ugu jiraan in ay hoos u dhigaan saboolnimada ka taagan guud ahaan qaranka, Wargayska The Gardian ee Tansaaniya ayaa sidaa wariyay. Muxuu kula yahay qoraalkan?